भाग्यमा विश्वास गर्ने बलिउड स्टारहरू काे-काे हुन् ? - ramechhapkhabar.com
भाग्यमा विश्वास गर्ने बलिउड स्टारहरू काे-काे हुन् ?
अभिनेत्री काजोललाई आफ्नो डायमण्ड स्टडेड ओम औँठीमा आफूलाई भन्दा बढी विश्वास छ । यो औँठी उनलाई पति अजय देवगनले उपहार दिएका हुन् । काजल यो औँठीलाई दाहिने हातको औँलामा लगाउँछिन् । काजलका अनुसार यो औँठीले उनलाई शान्त रहन सहयोग पुर्‍याएको छ ।